Fariin Uu Guddiga Xalinta Qilaafaadka Doorashooyinka Ee Uu U Diray Musharaxiinta Cabanaya – Great Banaadir
MUQDISHO – Iyadoo Maalmahii lasoo dhaafay ay soo kordheysay Cabashada laga muujinaayo Habka ay ku socoto Doorashada Golaha Baarlamaanka, ayaa waxaa Arrintaasi ka hadlay Guddiga Xalinta Qilaafaadka oo ku baaqay in Musharaxiinta wixii Tabasho ah ay qabaan ay usoo gudbiyaan Guddiga.
Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga Xalinta Qilaafaadka Maxamed Ibraahim Barre oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa tilmaamay in Musharax kasta oo tabanayo Cabasho ay u Garnaqi doonaan oo aysan ogolaan doonin in Muwaadin kasta aan la duudsiin doonin Xaquuqdooda aas aasiga ah ee ku saabsan inuu wax doorto ama la doorto.
“Musharax kasta waxaan ka codsaneynaa in Cabashadooda ay anaga toos noo soo marsiiyaan oo aysan la aadin Baraha Bulshada,” ayuu yiri Maxamed Ibraahim Barre.
Guddiga Xalinta Qilaafaadka ayaa sidoo kale sheegay in Cid kasta oo Musharax ah oo soo marta Habraaca loogu talo galay, iney wax ka qabanayaan Tabashadooda, islamarkaana waxay ka digeen in Cabashada ay qabaan Musharaxiinta ama Cid walba ineysan Cabashadooda kuso gudbin Baraha Bulshada ama Warbaahinta.
Hadalkaan kasoo baxay Gudiga Xallinta Qilaafaadka Doorashooyinka ayaa kusoo beegmaya Xilli ay Doorashooyinka socda ee Golaha Baarlamaanka ay ka jiraan Cabashooyin aad u badan ay muujinayaan Musharaxiinta dooneysa iney ku tartamaan oo xata waliba qaarkood laga hor istaagay iney tartamaan.